Bipolar disorder - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
စိတျကွှ စိတျကရြောဂါလို့ချေါပါတယျ ။ စိတျအခွအေနဟော အစှနျးနှဈဖကျကို ပွောငျးပွောငျးသှားတာမြိုးဖွဈပါတယျ ။ အဲ့အတှကျကို အိပျခြိနျမမှနျတော့တာ အားအငျကုနျခမျးနတော အပွူအမူပိုငျးတှပွေောငျးလဲနတော မြိုးတှဖွေဈလာပါတယျ ။
ဒီရောဂါရှိသူတှဟော အလှနျအမငျးပြျောရှငျတကျကွှနတေဲ့ အခြိနျ စိတျဆငျးရဲ စိတျဓာတျတှကေဆြငျး မလှုပျမကိုငျခငျြ နှုံးခှပွေီးနခေငျြတဲ့အခြိနျ ဆိုပွီး အစှနျးနှဈဖကျကို ရောကျရောကျနတေတျပါတယျ ။ ဘယျလောကျကွာကွာ တဈခြိနျစီကဖွဈသလဲတိုတာ လူတဈဦးနဲ့တဈဦးမတူပါဘူး ။ ဒီအခြိနျနှဈခုကွား ပုံမှနျအခွအေနရေောကျသှားလြှငျလညျး ပုံမှနျလူတဈဦးလို စဉျးစားတှေးချေါပွုမူနနေိုငျပါသေးတယျ ။ ဒါကွောငျ့လဲ စိတျကွှ စိတျကရြောဂါလို့ချေါတာပါ ။
အမြားအားဖွငျ့ တော့ စိတျကမြှုအပိုငျးဟာ စိတျကွှမှု အပိုငျးထကျ ပိုမြားပါတယျ ။
တဈဦးနဲ့တဈဦးမတူပါ ။ ဘယျအခြိနျမှာ စိတျကနြပွေီး ဘယျအခြိနျမယျ စိတျကွှနမေယျဆိုတာ ခနျ့မှနျးရခကျပါတယျ ။ တခြို့သူတှမှော စိတျကခြွငျး စိတျကွှခွငျးဟာ တဈသတျမှတျတညျးအခြိနျတျောတျောကွာကွာ ရှိနတေတျပွီး နောကျထပျ စိတျအခွအေနကေို တျောတျောကွာမှ ပွောငျးလဲတတျပါတယျ ။ ဒီလိုမြိုး အခွအေနဟော ရကျတှေ လတှသောမက နှဈနဲ့ခြီပွီး ကွာနိုငျပါတယျ ။
ရောဂါအခွအေနဆေိုးလာခွငျးဟာလဲ လူတဈဦးနှငျတဈဦး မနူသလို အခြိနျကာလလဲ မတူနိုငျပါ ။
* အလှနျအမငျးပြျောရှငျနမေယျ ၊ သာယာနမေယျ ၊ မြှျောလငျ့ခကျြတှနေဲ့ တကျကွှလှနျးနမေယျ
* ပြျောရှငျနရောကနေ ခကျြခငျြး ဒေါသတကွီး စိတျတို စိတျဆိုးလာမယျ
* စကားတှေ ခရားရလှေတျပွောဆိုနပေမေယျ့ အာရုံမစိုကျနိုငျတာတှဖွေဈနမေယျ
* အားအငျတှအေလိုလိုရနသေလိုဖွဈပွီး အအိပျအနနေညျးလာမယျ
* လိငျမှုစိတျတှေ မြားနမေယျ
* အလှနျကွီးမားပွီး လကျတှမေ့ဆနျတဲ့ အတှေးတှေ စီမံမှုတှေ လုပျမယျ ဘဝငျမွငျ့မယျ
* ဆုံးဖွတျခကျြခရြာတှမှော မှားယှငျးမယျ အားနညျးနမေယျ
* မူးယဈဆေးတှေ အရကျတှေ အလှနျအကြှံသုံးစှဲမိမယျ
* နှုံးခှပွေီး အားနညျးနမေယျ
* အရာရာဟာ မြှျောလငျ့ခကျြမဲ့နမေယျ
* အရငျကပြျောရှငျခဲ့တဲ့အရာတှကေ အဓိပ်ပာယျမရှိဖွဈလာမယျ
* ထိနျးခြုပျမရဘဲ ငိုကွှေးပူဆှေးမှုတှဖွေဈလာမယျ
* နဂိုကထကျ ပိုအိပျလာမယျ
* စားခငျြသောကျခငျြစိတျပြောကျသှားတာ ပိုစားလာလာတှဖွေဈပွီး ကိုယျအလေးခြိနျကဆြငျးသှားတာ ဝလာတာတှဖွေဈလာနိုငျတယျ
* သခေငျြစိတျတှေ သကွေောငျးကွံဖို့အတှေးတှဖွေဈလာမယျ
ဘယျသူတှမှော ဖွဈသလဲ ?
လူလတျပိုငျးတှရေယျ အသကျ ၁၃ ကနေ ၃၀ အတှငျး ပိုငျးရယျမှာ ပိုတှရေ့ပါတယျ ။ ယောကျြား မိနျးမ တူတူပဲ ဖွဈပှားလရှေိ့ပွီး မိသားစုထဲမှာ မြိုးရိုးကနေ ဆငျးသကျနိုငျပါတယျ ။ အမြိုးသမီးတှမှောက စိတျကွှစိတျကပြွောငျးလဲမှုဟာ ပိုမိုမွနျဆနျလရှေိ့ပွီး အမြိုးသားတှထေကျပို စိတျကခြိနျပိုမြားပါတယျ ။
ဒီအခွအေနရေောဂါရှိတဲ့အမြားစုဟာ မူးယသျဆေးတှေ အရကျတှအေလှနျအကြှံသုံးစှဲကွပါတယျ ။ ဒါတှကေနပေဲ စိတျကွှစိတျကရြောဂါရှိသူတှဟော ပိုမိုပွီး စိတျကွှ စိတျကအြခွအေနဟော ပိုပိုဆိုးလာကွတာပါ ။
ယခုအခြိနျအထိ လလေ့ာနကွေဆဲဖွဈပွီး အဓိက မြိုးရိုးကွောငျ့ ဦးနှောကျတှငျးပွောငျးလဲမှုနဲ့ စိတျဖီစီးမှုတှကွေောငျ့လို့ အကွမျးဖငျြးယူဆကပြါတယျ ။
ဒီစိတျကွှစိတျကရြောဂါဖွဈလာပွီ လက်ခဏာတှရှေိလာတယျလို့ ခံစားရတယျ မိသားစု အပေါငျးအသငျးတှကေ ပွောပွကွတယျဆိုရငျ မိသားစုဆရာဝနျ ဒါမဟုတျ စိတျကနျြးမာ ဆရာဝနျနဲ့ပွသသငျ့ပါပွီ ။ ပွသတဲ့အခါ စိတျကနျြးမာရေးနှငျ့ပတျသတျသောမေးခှနျးတှေ စိတျပူပနျစရာ စိတျသောကတှေ အကွောငျးရငျး ပွသနာတှေ ကို မေးမွနျးပွီး ရောဂါကိုစဈဆေးမှာဖွဈပါတယျ ။ ဒီလိုစဈဆေးပွီး စိတျကွှစိတျကရြောဂါလား တဈခွားစိတျရောဂါလားဆိုတာလဲ ကှဲကှဲပွားပွားသိလာနိုငျပွီး စနဈတကြ ကုသမှုခံယူနိုငျမှာပါ ။
မိမိပတျဝနျးကငျြ မိသားစု အပေါငျးအသငျးမြားထဲတှငျလဲ စိတျကွှစိတျကြ လက်ခဏာမြား တှရှေိ့ပါက ဆရာဝနျနှငျ့ပွသရနျ တိုကျတှနျးပါ ။ စိတျရောဂါဆိုသညျမှာ ရှကျစရာကွောကျစရာမလိုကွောငျး ဆေးကုလြှငျ သကျသာကောငျးမှနျမညျဖွဈကွောငျး တိုကျတှနျးပွောကွားပါ ဖြောငျးဖပြါ ။
စိတ်ကြွ စိတ်ကျရောဂါလို့ခေါ်ပါတယ် ။ စိတ်အခြေအနေဟာ အစွန်းနှစ်ဖက်ကို ပြောင်းပြောင်းသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ် ။ အဲ့အတွက်ကို အိပ်ချိန်မမှန်တော့တာ အားအင်ကုန်ခမ်းနေတာ အပြူအမူပိုင်းတွေပြောင်းလဲနေတာ မျိုးတွေဖြစ်လာပါတယ် ။
ဒီရောဂါရှိသူတွေဟာ အလွန်အမင်းပျော်ရွှင်တက်ကြွနေတဲ့ အချိန် စိတ်ဆင်းရဲ စိတ်ဓာတ်တွေကျဆင်း မလှုပ်မကိုင်ချင် နှုံးခွေပြီးနေချင်တဲ့အချိန် ဆိုပြီး အစွန်းနှစ်ဖက်ကို ရောက်ရောက်နေတတ်ပါတယ် ။ ဘယ်လောက်ကြာကြာ တစ်ချိန်စီကဖြစ်သလဲတိုတာ လူတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးမတူပါဘူး ။ ဒီအချိန်နှစ်ခုကြား ပုံမှန်အခြေအနေရောက်သွားလျှင်လည်း ပုံမှန်လူတစ်ဦးလို စဉ်းစားတွေးခေါ်ပြုမူနေနိုင်ပါသေးတယ် ။ ဒါကြောင့်လဲ စိတ်ကြွ စိတ်ကျရောဂါလို့ခေါ်တာပါ ။
အများအားဖြင့် တော့ စိတ်ကျမှုအပိုင်းဟာ စိတ်ကြွမှု အပိုင်းထက် ပိုများပါတယ် ။
တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးမတူပါ ။ ဘယ်အချိန်မှာ စိတ်ကျနေပြီး ဘယ်အချိန်မယ် စိတ်ကြွနေမယ်ဆိုတာ ခန့်မှန်းရခက်ပါတယ် ။ တချို့သူတွေမှာ စိတ်ကျခြင်း စိတ်ကြွခြင်းဟာ တစ်သတ်မှတ်တည်းအချိန်တော်တော်ကြာကြာ ရှိနေတတ်ပြီး နောက်ထပ် စိတ်အခြေအနေကို တော်တော်ကြာမှ ပြောင်းလဲတတ်ပါတယ် ။ ဒီလိုမျိုး အခြေအနေဟာ ရက်တွေ လတွေသာမက နှစ်နဲ့ချီပြီး ကြာနိုင်ပါတယ် ။
ရောဂါအခြေအနေဆိုးလာခြင်းဟာလဲ လူတစ်ဦးနှင်တစ်ဦး မနူသလို အချိန်ကာလလဲ မတူနိုင်ပါ ။
* အလွန်အမင်းပျော်ရွှင်နေမယ် ၊ သာယာနေမယ် ၊ မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ တက်ကြွလွန်းနေမယ်
* ပျော်ရွှင်နေရာကနေ ချက်ချင်း ဒေါသတကြီး စိတ်တို စိတ်ဆိုးလာမယ်
* စကားတွေ ခရားရေလွှတ်ပြောဆိုနေပေမယ့် အာရုံမစိုက်နိုင်တာတွေဖြစ်နေမယ်
* အားအင်တွေအလိုလိုရနေသလိုဖြစ်ပြီး အအိပ်အနေနည်းလာမယ်
* လိင်မှုစိတ်တွေ များနေမယ်
* အလွန်ကြီးမားပြီး လက်တွေ့မဆန်တဲ့ အတွေးတွေ စီမံမှုတွေ လုပ်မယ် ဘဝင်မြင့်မယ်
* ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွေမှာ မှားယွင်းမယ် အားနည်းနေမယ်
* မူးယစ်ဆေးတွေ အရက်တွေ အလွန်အကျွံသုံးစွဲမိမယ်
* နှုံးခွေပြီး အားနည်းနေမယ်
* အရာရာဟာ မျှော်လင့်ချက်မဲ့နေမယ်
* အရင်ကပျော်ရွှင်ခဲ့တဲ့အရာတွေက အဓိပ္ပာယ်မရှိဖြစ်လာမယ်
* ထိန်းချုပ်မရဘဲ ငိုကြွေးပူဆွေးမှုတွေဖြစ်လာမယ်
* နဂိုကထက် ပိုအိပ်လာမယ်
* စားချင်သောက်ချင်စိတ်ပျောက်သွားတာ ပိုစားလာလာတွေဖြစ်ပြီး ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းသွားတာ ဝလာတာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်
* သေချင်စိတ်တွေ သေကြောင်းကြံဖို့အတွေးတွေဖြစ်လာမယ်
ဘယ်သူတွေမှာ ဖြစ်သလဲ ?
လူလတ်ပိုင်းတွေရယ် အသက် ၁၃ ကနေ ၃၀ အတွင်း ပိုင်းရယ်မှာ ပိုတွေ့ရပါတယ် ။ ယောက်ျား မိန်းမ တူတူပဲ ဖြစ်ပွားလေ့ရှိပြီး မိသားစုထဲမှာ မျိုးရိုးကနေ ဆင်းသက်နိုင်ပါတယ် ။ အမျိုးသမီးတွေမှာက စိတ်ကြွစိတ်ကျပြောင်းလဲမှုဟာ ပိုမိုမြန်ဆန်လေ့ရှိပြီး အမျိုးသားတွေထက်ပို စိတ်ကျချိန်ပိုများပါတယ် ။
ဒီအခြေအနေရောဂါရှိတဲ့အများစုဟာ မူးယသ်ဆေးတွေ အရက်တွေအလွန်အကျွံသုံးစွဲကြပါတယ် ။ ဒါတွေကနေပဲ စိတ်ကြွစိတ်ကျရောဂါရှိသူတွေဟာ ပိုမိုပြီး စိတ်ကြွ စိတ်ကျအခြေအနေဟာ ပိုပိုဆိုးလာကြတာပါ ။
ယခုအချိန်အထိ လေ့လာနေကြဆဲဖြစ်ပြီး အဓိက မျိုးရိုးကြောင့် ဦးနှောက်တွင်းပြောင်းလဲမှုနဲ့ စိတ်ဖီစီးမှုတွေကြောင့်လို့ အကြမ်းဖျင်းယူဆကျပါတယ် ။
ဒီစိတ်ကြွစိတ်ကျရောဂါဖြစ်လာပြီ လက္ခဏာတွေရှိလာတယ်လို့ ခံစားရတယ် မိသားစု အပေါင်းအသင်းတွေက ပြောပြကြတယ်ဆိုရင် မိသားစုဆရာဝန် ဒါမဟုတ် စိတ်ကျန်းမာ ဆရာဝန်နဲ့ပြသသင့်ပါပြီ ။ ပြသတဲ့အခါ စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သတ်သောမေးခွန်းတွေ စိတ်ပူပန်စရာ စိတ်သောကတွေ အကြောင်းရင်း ပြသနာတွေ ကို မေးမြန်းပြီး ရောဂါကိုစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီလိုစစ်ဆေးပြီး စိတ်ကြွစိတ်ကျရောဂါလား တစ်ခြားစိတ်ရောဂါလားဆိုတာလဲ ကွဲကွဲပြားပြားသိလာနိုင်ပြီး စနစ်တကျ ကုသမှုခံယူနိုင်မှာပါ ။
မိမိပတ်ဝန်းကျင် မိသားစု အပေါင်းအသင်းများထဲတွင်လဲ စိတ်ကြွစိတ်ကျ လက္ခဏာများ တွေ့ရှိပါက ဆရာဝန်နှင့်ပြသရန် တိုက်တွန်းပါ ။ စိတ်ရောဂါဆိုသည်မှာ ရှက်စရာကြောက်စရာမလိုကြောင်း ဆေးကုလျှင် သက်သာကောင်းမွန်မည်ဖြစ်ကြောင်း တိုက်တွန်းပြောကြားပါ ဖျောင်းဖျပါ ။